Isaya 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
15 Chirevo pamusoro peMoabhi:+ Nokuti Ari+ reMoabhi rakapambwa usiku, uye rakaparadzwa. Nokuti Kiri+ reMoabhi rakapambwa usiku, uye rakaparadzwa. 2 Iye akwira kuImba uye kuDhibhoni,+ kunzvimbo dzakakwirira, kunosvimha misodzi. Moabhi inoungudza pamusoro peNebho+ nepamusoro peMedhebha.+ Misoro yose iri mairi ine miparavara;+ ndebvu dzose dzakadimburirwa. 3 Ivo vakasungira masaga+ vari mumigwagwa yayo. Vanhu vayo vose vanoungudza vari pamusoro pematenga edzimba+ ayo uye munzvimbo dzayo dzinoungana vanhu, vachiburuka vachisvimha misodzi.+ 4 Maguta eHeshbhoni neEreyare+ anoshevedzera. Inzwi rawo ranzwika kusvikira kuJahazi.+ Ndokusaka varume veMoabhi vane zvombo vachiramba vachishevedzera. Mweya yavo yakadedera mukati mavo. 5 Mwoyo wangu unoshevedzera pamusoro paMoabhi.+ Vanhu vari kutiza vasvika kuZoari+ neEgrati-sherishiya.+ Nokuti munhu mumwe nomumwe anokwira pamukwidza weRuhiti+ achisvimha misodzi; nokuti pakuenda kuHoronaimu+ vanochema pamusoro pokuparadzwa kwacho. 6 Nokuti mvura yeNimurimu+ inoparadzwa chose. Nokuti uswa hwakasvibirira hwaoma, uswa hwapera; hapana chakasvibirira.+ 7 Ndokusaka vachiramba vachitakura zvakasara pamwe chete nezvinhu zvavo zvakachengetwa zvavakaunganidza, vachiyambuka mupata une rukova wemiti yemishambangwena. 8 Nokuti kuchema kwasvika munharaunda yose yeMoabhi.+ Kuungudza kwayo kunosvika kuEgraimu; kuungudza kwayo kunosvika kuBheeri-erimu, 9 nokuti mvura yeDhimoni yazara neropa. Nokuti ndichaisa zvinhu zvokuwedzera paDhimoni, zvakadai seshumba nokuda kwevapukunyuki veMoabhi vaya vanopukunyuka uye nokuda kwevachasara vomunyika yacho.+